कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: कलाकारको परिचय अर्थको अनर्थ प्रस्तुति —रुसिला चित्रकार , —वांगेमुढा, काठमाडौं
कलाकारको परिचय अर्थको अनर्थ प्रस्तुति —रुसिला चित्रकार , —वांगेमुढा, काठमाडौं
अर्थको अनर्थ प्रस्तुति —रुसिला चित्रकार , —वांगेमुढा, काठमाडौं
बाल्यकाल देखि संगीत कला यात्रामै आत्मा सन्तुष्टीको आभाष प्रकत गर्दै, आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरी लाखौं श्रोता तथा दर्शकहरुमा लोकप्रिय गायीकाको पहिचान बनाउन सफल गायीका रुसिला चित्रकारसँगको छोटो सम्बाद ।
१.कहिलेदेखि संगीत कला यात्रामा लाग्नु भयो ?
— ३० वर्ष भयो संगीत कला अंगालेका । मैले ७ वर्षको उमेर देखि गाउन थालेकी ।
२. कस्को प्रेरणाले तपाईं गायीका बन्न सफल हुनु भो ?
— आदरणीय जन गायक रामेश श्रेष्ठ, बरिष्ठ संगीतकार रामकृष्ण दुवाल, साहित्यकार नाति बज्र वहाँहरुको प्रेरणाले “चुलिं चया चं चं” एलबमबाट मैले सुरुवाट गरेकी थिएँ । जस्मा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठको रचना, न्ह्यू बज्राचार्यको संगीत रहेको थियो ।
३.अहिलेसम्म कतिवटा गीत गाउनु भो ?
— २२ वटा गीतहरु गाउने सौभाग्य पाएँ ।
४. किन गाउनु हुन्छ ?
—मानिसहरु एक न एक नसामा लाग्छ भन्छन् । म संगीत नसामा परें । वास्तवमा संगीत एक प्रकारको थेरापी पनि हो । मलाई संगीत नै जीवनको अभिन्न अंग जस्तो लाग्छ ।
५.संगीत कला क्षेत्रमा लागेर के पाउनु भयो ?
— आत्म सन्तुष्टी र श्रोता तथा दर्शकहरुको माया ।
६. घरको कामबाट पंछिन महिलाहरु संगीतमा लाग्छ भनिन्छ तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
— संगीतको मर्म नबुझेकोले जे पनि आरोप लगाइन्छ । अफिस र घरको काम धानेर मात्र फुर्सदको समयमा रियाज गर्छु । साईत जुधेपछि प्रस्तुत गर्छु ।
७. गीतको परिभाषा ?
—शब्दको भावना अनुसार संगीत र स्वरको समिश्रण
८. मिठो गीत पनि भिज्युलाईज गर्दा खल्लो हुन्छ किन ?
— गीतलाई भावनात्मक अभिव्यक्त गर्न नसकेपछि गीतनै खल्लो हुने स्वाभाविकै हो । आज भोलि भिजुलाईज फेसनको रुपमा लिने गर्दाले पनि अर्थको अनर्थ प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।
९.संगीतले मानविय जीवनलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
—दुःखमय जीवनलाई एक छिनको थमाई मेटाउँछ । आनन्दको अनुभूति गराउँछ । संगति मनोरन्जन मात्र नभई चेतना तथा सन्देशमुलक पनि हुन्छ ।राम्रा निर्माणमा संगीतले अहम भुमिका खेलेको पाईन्छ ।
मनमा उब्जेका शब्दहरु कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक मार्फत व्यक्त गर्न पाउँदा धेरै खुसि लाग्यो । पत्रिकाको सपरिवार प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
Published on Kirtipur Sandesh Issue 474 Date 8/9/2077
Posted by kirtipur.com.np at 3:32 PM
Praveen Joshi February 5, 2021 at 6:04 PM